ब्रोकरलाई धितोपत्रको १० लाख कारबाही, को को परे? - Arthatantra.com
ब्रोकरलाई धितोपत्रको १० लाख कारबाही, को को परे?
काठमाडौं । नक्कली सेयर कारोबार गर्ने तीन ब्रोकर कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले कारवाही गरेको छ ।
ति कम्पनीले चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी र सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी को नक्कली सेयर कारोबार गरेको प्रमाणका आधारमा कारवाही गरिएको हो । अग्रवाल सेक्युरिटिज, श्रीहरी सेक्युरिटिज, सप्रवी सेक्यूरिटिज प्रालि तथा सिप्रवी सेक्युरिटिज कम्पनी प्रालिलाई नक्कली कारोबार गरेको अधारमा कारवाही गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले अग्रवाल सेक्युरिटिजलाई र श्रीहरी सेक्युरिटिजलाई १० लाख रुपैयाँको दरमा तथा सप्रवी सेक्यूरिटिज प्रालि तथा सिप्रवी सेक्युरिटिजलाई ५० हजार रुपैयाँ बराबर कारवाही गरेको हो । श्रीहरि सेक्युरिटिज तथा अग्रवाल सेक्यूरिटिजका कार्यकारी प्रमुखलाई जनही ५० हजारका दरमा जरिवाना गरिएको छ ।
जीएण्ड जी इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको नाममा गोविन्द घिमिरे र उनको समूहले यी कम्पनीहरुको नक्कली सेयर कारोबार गरेका थिए ।
चिलिमेको नक्कली सेयर कारोबारमा ग्राहकको स्पष्ट पहिचान खुल्ने कागजात तथा विवरण लिई सोको अभिलेख नराखेको भन्दै अग्रवाल सेक्युरेटिजलाई कारवाही गरेको हो ।
जीएण्ड जी इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको १३ हजार ५ सय कित्ता नक्कली सेयर एकआपसमा कारोबार गरेको पाइएको थियो । यी सेयरको धितो राखेर समूहका सदस्यले सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैङ्कबाट ६४ लाख २० हजार रुपैयाँ र युनाइटेड फाइनान्सबाट समेत ५९ लाख २७ हजार रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । चिलिमे जलविद्युत्को नक्कली शेयर जीएण्डजीका सञ्चालक सृष्टि काफ्ले, सोना दाहाल, रामहरि आचार्यको नामबाट विक्री भएको थियो भने गोविन्द घिमिरेको नामबाट खरीद गरिएको थियो ।
अग्रवाल सेक्युरिटिजको जमानीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा कर्जा दिएका थिए । पछि अग्रवाल सेक्युरिटिजले नै ती बैङ्कलाई कर्जाबापतको रकम चुक्ता गरिदिएको थियो । अग्रवाल सेक्युरिटिजले धितोपत्र बोर्डमा समेत पत्राचार गरेर यी रकम असुल गरिदिन अनुरोधपत्र पेश गरेको थियो ।
त्यही समूहले नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको नक्कली सेयर कारोबार श्रीहरि सेक्युरिटिज प्रालिबाट भएको थियो । सिप्रवी सेक्यूरिटिज प्रालि. कार्यकारी प्रमुखले यस्तो कारोवार सम्बन्धमा शुरुवातमा जानकारी पाएर पनि सो घटना उजागर गरेको र बजारमा हुने थप क्षतीलाई न्यूनिकरण गर्न सहयोग गरेको अवस्था समेत कम्पनीलाई न्युन कारवाही गरिएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।
ग्राहकको स्पष्ट पहिचान खुल्ने कागजात तथा विवरण लिएर अभिलेख नराखेकोमा भने सिप्रवी सेक्यूरिटिजलाई कारवाही गरिएको हो । कम्पनीलाई ५० हजार कारवाही सहित सचेत गराइएको छ ।
२०७४ पुस २६ गते प्रकाशित
बजारमा आइपुग्यो आइफोन–सेभेन, मूल्य ९१ हजारदेखि १ लाख ३५ हजासम्म ! काठमाण्डौं । नेपालमा बहुप्रतिक्षित एप्पल आइफोन– सेभेनको बिक्री सुरु भएको छ । एप्पलको […]
धार्मिक तीर्थस्थलमा साउने मेला चितवन । नेपालकै पवित्र तीर्थस्थल देवघाटधाममा साउने संक्रान्ति मेला शुरु भएको छ ।आज […]
सैलुन चलाएर मासिक दुई लाखभन्दा बढी आम्दानी, तीनजनालाई रोजगारी पर्वत । सानै उमेरदेखि विदेश जाने र प्रशस्त धन कमाएर ल्याउने सपना बोकेका यहाँका एक युवाले […]
दुवै खुट्टा गुमाएका गायक गर्बुजा पुरस्कृत पोखरा। लोकगायक खड्ग गर्बुजालाई अर्जुन नेपाली स्मृति संगीत पुरस्कार शनिबार प्रदान गरिएको […]
आज भाईटिका,११ बजेर ५२ मिनेटको समय सबैभन्दा उत्तम काठमाडौ । यमपञ्चक अर्थात् तिहारको पाँचौं दिन भाइटीकाको साईत ११ बजेर ५२ मिनेटलाई उत्तम […]